Eserese eserese eserese nke na - akpata ọgba aghara mgbe ọ bụla | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 19, 2017 Satọde, Febụwarị 18, 2017 Douglas Karr
M chuckled ntakịrị mgbe m hụrụ nke a infographic n'ihi na, dị ka ọ na-enyo, M ga-abụ a graphic imewe noob. Ma, Ewoo, ọ bụ ihe ịtụnanya na-achọpụta ihe m amaghị banyere ụlọ ọrụ m agbakwunyere miri emi maka afọ 25 gara aga. Na m agbachitere, M naanị dabble na-arịọ ndịna. Obi dị anyị ụtọ na ndị na-ese ihe anyị maara ihe karịa gbasara m.
Ikwesiri ima ihe di iche n’etiti okwu ndia a na aghotahie kari na okwu ihe nlere anya n’ihi na chee ya, o bughi ndi na ere ahia na onye mmebe, obu kwa onye edemede Ikwesiri ima ihe gi! Aamina Suleman
Aamina na ndi otu na Chee echiche tinye ọnụ nnukwu ọhụụ a nke 14 kachasị nghọtahie ma ọ bụ okwu ezighi ezi nke ndị na-ese ihe nkiri noob na-eji.
Font na Typeface
A typeface abụghị font, ma a font nwere ike ịbụ na ezinụlọ nke typefaces.
Ndepụta na Kerning
Ndepụta bụ oghere dị n’etiti otu leta, kerning bụ ohere n’agbata mkpụrụ edemede n’otu n’otu.
Gradient vedi Gradient ntupu
A gradient bụ nwayọọ nwayọọ mgbanwe site na otu agba ọzọ gafee elu nke a udi. Ngwurugwu gradient bụ ngwá ọrụ nke na-emepụta ntupu na ọdịdị nwere ọtụtụ, isi ihe edezi na-enye ohere maka agba, shading, na mmetụta akụkụ.
Backdrop na Ndabere
Backdrop na-ezo aka akwa ma ọ bụ mpempe akwụkwọ a kwụgidere n'azụ ihe, mana ndabere bụ ihe ọ bụla dị n'azụ ihe a na-elekwasị anya na ihe oyiyi ma ọ bụ imewe.
EPS na AI
EPS encapsulated postscript, ụdị faịlụ na-echekwa eserese eserese eserese na-akwadoghị nghọta. AI bụ Adobe Illustrator usoro nke nwere vector layered ma ọ bụ ihe raster agbakwunyere na enwere ike dezie ya site na iji ihe ngosi.
Tint veso ụda
A na-emepụta Tint site na ịgbakwunye ọcha na agba ọcha, na-amụba ìhè ya. Tone bụ chroma nke agba, mepụtara mgbe agba ntụ na-agbakwunye na agba.
Akwụkwọ edemede na Wordmark
Edemede akara bụ akara njiri mara ejiri mkpụrụ akwụkwọ mara mma dị ka mkpịrịsị mkpirisi ma ọ bụ ndebiri. Ihe njirimara ederede bu ihe omuma ederede puru iche nke etinyere na ederede na logo oru ma obu akara akara.
Hue na Agba
Hue bụ ụdị agba dị ọcha, ọ bụghị ndo ma ọ bụ agba. Hues dị uhie, oroma, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ na violet. Agba bụ okwu niile na-ezo aka na agba, ndo, tint na ụda. Uru ọ bụla nke hue na-ezo aka na agba.
DPI vesos PPI
DPI bụ nọmba nke ntụpọ na ibe ọ bụla e biri ebi. PPI bụ ọnụ ọgụgụ pikselụ kwa inch nke a dijitalụ oyiyi.
Oghere White na Oghere Ọjọọ
Oghere ọcha bụ akụkụ nke ibe fọdụrụ n'amaghị ama. O nwere ike ịbụ agba ọ bụla, ọ bụghị naanị ọcha. Oghere na-adịghị mma bụ imewe ezi uche emepụtara enweghi ihe mmebe ọ bụla iji mepụta echiche efu.
Wireframe vesos Prototype
Wireframe bụ ụkpụrụ nke imewe eji eji ụbụrụ eme ihe site na iji eserese ma ọ bụ ngwa ọrụ. Prototypes bụ ihe nnọchianya ziri ezi nke atụmatụ ebe ị nwere ike ịmekọrịta ya tupu ịmechaa ma rụpụta ọrụ ahụ.
Bitmap vector na Vector
Bitmaps, ma ọ bụ eserese eserese, bụ onyonyo a na-enweghị ike ịkọwapụ edo edo sitere na grid pixel. Formatsdị ndị a na-ahụkarị bụ GIF, JPG / JPEG, ma ọ bụ PNG. Ihe eserese Vector bụ imezi edezi mere site na usoro ebe ibipụta anaghị agbanwe agbanwe na ogo. Formatsdị ndị a na-ahụkarị bụ AI, EPS, PDF, na SVG.
Black & White na Grayscale
B / W ma ọ bụ B&W na-eme ka imples si ọcha na oji. Grayscale bụ onyonyo ma ọ bụ nka na a nso nke ụkpụrụ si na-acha ọcha ka nwa ọ bụla tint ma ọ bụ ndo.
Ppinggha mkpụrụ osisi na Mark Marks
Ppinggba ihe ubi na-ewepu mpụta akụkụ nke ihe oyiyi a na-achọghị. Akara akụrụngwa bụ ahịrị agbakwunye na nkuku ihe oyiyi iji nyere ndị na-ebi akwụkwọ aka ịcha na ịkpụzi.
Okwu 14 Na-aghọtahiekarị Nke Ndị Nsepụta Ihe Noob Ji
Ọ bụrụ na nkọwa m dị n'elu ezughi, lee ihe omuma ihe omuma atu:
Tags: Aamina SulemanAdobeaiNdaghachi azụBackdrop na NdaberendabereBitmapBitmap vector na VectoragbaAkara ọkacroppingPpinggha mkpụrụ osisi na Mark Marksimewe teminolojidpiDPI vesos PPIEderede ederede encapsulatedEPSemeFont na TypefacegrajentịGradient ntupuGradient vedi Gradient ntupuihe ọsịseụdị ihe osisenkọwapụta nkọwapụta ihe osisehuehue na agbakerningleta ozimkpụrụedemede na akara ederedelogodesignguruOghere Dị Mkpappiprototyperasterngwa ngwaEcheretiritint veso ụdaụdatrackingNdepụta na KerningFacedị Typefacengwavector na rasteroghere ọchaOghere White na Oghere ỌjọọwayaWireframe vesos Prototypeakara okwu
Chris Thornton kwuru
E jikọtara nke a nke ọma. Ekele diri gi na Aamina Suleman, oru oma.